Okungahlehleleki: Yondla Imikhiqizo Yakho Kumanani Wokuqhathanisa Amanani, Izihlanganisi, Izindawo Zezimakethe, Nezinethiwekhi Zesikhangiso | Martech Zone
Ukufinyelela izithameli lapho zikhona kungenye yamathuba amakhulu kunanoma yiliphi isu lokumaketha ledijithali. Noma ngabe uthengisa umkhiqizo noma insiza, ushicilela i-athikili, uhlanganisa i-podcast, noma wabelana ngokubekwa kwevidiyo yalezo zinto lapho kukhona khona abantu ababandakanyekile, izithameli ezifanele zibalulekile empumelelweni yebhizinisi lakho. Kungakho cishe yonke ipulatifomu inokubambisana komsebenzisi kanye nokuxhumana okufundeka ngomshini.
Uma ubheka emuva kulo nyaka, ama-lockdowns aphendulele ukuthengisa kanye ne-ecommerce ubheke phansi. URob Van Nuenen, Isikhulu esiphezulu seChannable kanye ne-e-commerce, sinikeza umbono olandelayo ngokuphazamiseka:
Izitini nosimende bavule isitolo uma bengenakho ukutholakala online ngaphambilini. Isimanga ukuthi kwakushesha kangakanani kwavela izitolo ezincane nokuthi obani abanikazi - abathengisi abasanda kusebenza noma abangaqashiwe kudala izitolo zemikhiqizo efunwayo ukuze bakwazi ukugcina umholo ungena.
Izitolo eziku-inthanethi kukhona ukwehlukanisa iziteshi abathengisa kuzo - emhlabeni jikelele
I-COVID bekuyikholi yokuvuka ukuthengisa komphakathi - futhi manje isithathwa njengesiteshi esidingekayo
Iziteshi eziku-inthanethi njenge -Google ZIBALULEKILE ekusekeleni umphakathi wendawo ngokugcina abathengi bendawo
Ipulatifomu yakhe, Okungahle kwenzeke, iyinhlangano ehamba phambili emhlabeni jikelele ye-e-commerce enika amandla abathengisi bedijithali, ama-brand, kanye nabathengisi be-inthanethi ukunqoba lezi zinselele namathuba.
Kuyini Okuphakelayo Komkhiqizo?
Okuphakelayo komkhiqizo yifayela ledijithali eliqukethe uchungechunge lwemininingwane efundisayo yemikhiqizo eminingi. Ukuphakelwa komkhiqizo kungasetshenziselwa ukuhlanganisa idatha ngesikhathi sangempela kusuka ku-ecommerce yakho noma ipulatifomu yokusungula ngaphandle kwezinye izinhlelo - kufaka phakathi ukuphathwa kokusebenzisana, amapulatifomu wokumaketha nge-imeyili, imithombo yezokuxhumana, amapulatifomu we-ecommerce, kanye / noma amapulatifomu okuphatha izikhangiso
Okungahleleki: Thengisa Imikhiqizo Yakho Yonke Indawo
Okungahle kwenzeke inikeza ithuluzi eliku-inthanethi lama-ejensi wokumaketha nabathengisi abakwi-inthanethi ukuthumela imikhiqizo yabo noma izinsiza ezimakethe ezahlukahlukene, izinjini zokuqhathanisa, nezinkundla zokuxhumana. Nge-Channable, amabhizinisi angahlunga kalula, aqedele, futhi athuthukise imininingwane yawo yomkhiqizo ukufeza imiphumela engcono. Ipulatifomu bese ithumela imininingwane ethuthukisiwe kunoma isiphi isiteshi sokuthekelisa abazikhethele sona (isb. I-Amazon, Shopping.com, noma iGoogle).
Izici Zokulawulwa Okuphakelayo Okungathathelwa Kuhlanganisa
Ukuhlukaniswa kwemikhiqizo okulula - Ithuluzi lokuphatha okuphakelayo likuvumela ukuthi uhlele imikhiqizo yakho ukuze ifane nezigaba zesiteshi sokuthekelisa. Nge-Channable, ungenza ngokushesha imikhakha ngokusebenzisa ukuhlukaniswa okuhlakaniphile kwamanye amapulatifomu wokukhangisa athandwa kakhulu. Le nqubo ingakusheshisa kakhulu ukusethwa kokuphakelayo okusha, ikhulise ukubonakala kwakho esiteshini, futhi ikhulise ukufinyelela kwakho.
Inamandla uma-ke-imithetho - Imvamisa, uzodinga unjiniyela ukuvuselela okuphakelayo komkhiqizo wakho. Ngokusekelwa yithuluzi lokuphathwa kokuphakelayo, uma-ke-imithetho elula ikuvumela ukuthi 'uzikhodi'. Le mithetho izophinda isetshenziswe emikhiqizweni emisha engezwe esitolo sakho esiku-inthanethi. Ungalawula ngokunembile ukugeleza kwemikhiqizo esiteshini ngasinye sokuthumela futhi uguqule imininingwane ngasikhathi sinye. Ithuluzi elihle lokuphatha okuphakelayo lizokunikeza impendulo esheshayo ngemuva kokuthi umthetho ngamunye usetshenzisiwe kukhathalogi yomkhiqizo wakho.
Ukuphakelwa kwedatha esezingeni eliphakeme - Ukuthekelisa ikhwalithi ephezulu, okuphakelayo kwedatha okunempilo ngokuphelele kuzokwengeza ukubonakala kwakho ku-inthanethi. Ngokuvamile, udinga ukufanisa 'izinkambu' eziqukethe imininingwane yomkhiqizo kokuphakelayo kwakho kokungenisa kuya 'ezinkambu' ezidingekayo zokuphakelayo okufiswa okuthekelwayo. Ithuluzi lokuphathwa kokuphakelayo likwazi konke ukucaciswa kokuphakelayo kweziteshi zalo ezihlanganisiwe futhi lihlala lisesikhathini ngezinguquko nezibuyekezo.
Okuphakelayo nama-API - Ukuqinisekisa mathupha ukuthi imininingwane yomkhiqizo othunyelwe, njengesitoko, ihlala inembile ingathatha isikhathi sakho esiningi. Ezinye izimakethe zinikeza ukuxhumana kwe-API esitolo sakho esiku-inthanethi esivumela ukushintshana kolwazi okuzenzakalelayo, okuqhubekayo kolwazi phakathi kwalezi zingxenyekazi ezimbili. Amathuluzi okuphatha okuphakelayo angangenisa idatha yakho yokuphakelayo ngezikhathi ezithile ukuqinisekisa ukuthi uhlu lwakho lomkhiqizo nolwazi lwakho lwasemuva kuvumelanisiwe neziteshi zakho zokuthumela.
Ukungeniswa okungathathelwa njengamanje okuvela kwaLightspeed, Shopify, ecManager, Magento, CCVShop, Divide.NOW, WooCommerce, Mijnwebwinkel, inRiver, PrestaShop, Shopware, BigCommerce, nokuningi. Ukunikezwa okungashintshwa Ngaphezu kwe-2500 amawebhusayithi wokuqhathanisa amanani, amanethiwekhi ahambisanayo, nezindawo zokuthengisa ongathumela kuzo.
Tags: ukuphathwa kwesikhangiso komkhiqizoukudla komkhiqizo wokuhambisanaokuphakelayo komkhiqizo we-amazonCCVShopengashintshwaiziteshii-covid-19Hlukanisa.MANJEecManagerezokuhweba ngekhompyuthaokuphakelayo kwe-ecommerceokuphakelayo komkhiqizo we-ecommercei-imeyili yokuthengisa umkhiqizo feedukuphathwa kokuphakelayogoogleumfulaisivinini esikhanyisiweMagentoMijnwebwinkelokuphakelayo komkhiqizo we-ppcPrestaShopokuphakelayo komkhiqizoukuphathwa kokuphakelwa komkhiqizoURob Van NuenenthengaIzitoloyokudla komkhiqizo wezokuxhumanaukuthengisa komphakathiWooCommerce